တရုတ် PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး, အကြီးစား PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး, Transparent အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါးပေးသွင်း
ဖေါ်ပြချက်:PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး,အကြီးစား PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး,ပွင့်လင်းမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး,ဂရိတ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး > PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး
PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး, အကြီးစား PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ပွင့်လင်းမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
စက်ရုံ Fast Rolling အလိုအလျောက်လှိမ့်တံခါးတံခါး High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness. Transparent...
စက်ရုံစက်မှုလုပ်ငန်းလျင်မြန်စွာလှိမ့်အလိုအလျှောက်လှည့်တံခါးတံခါး High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness....
စက်ရုံစက်မှုလုပ်ငန်း PVC Fast Rolling Automatic တံခါး High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness. Transparent...
စက်ရုံစက်မှုလုပ်ငန်း Fast Rolling အလိုအလျောက်တံခါး High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness. Transparent...
စက်ရုံစက်မှုလုပ်ငန်း Fast Rolling တံခါး High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness. Transparent curtain: 1.2...
စက်မှုအတွင်းပိုင်း PVC အထည်အလိပ်မြန်နှုန်းမြင့်တံခါး High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness. Transparent...
စက်ရုံအလိုအလျောက်စက်မှုလုပ်ငန်း Fast PVC Rolling Shutter Door High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness....
အလိုအလျောက်စက်ရုံစက်မှုလုပ်ငန်း PVC တံခါးကိုမြန်ဆန်စွာဖွင့်ပေးခြင်း High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness....
အလိုအလျောက် PVC မြန်နှုန်းမြင့်လှိမ့်တံခါး High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm...
PVC အမြန်လှိမ့်တံခါးတံခါး High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness. Transparent curtain: 1.2...
စင်ကြယ်သော ROOM တွင် PVC အထည်အလိပ်မြန်လှိမ့်စက်မှုလုပ်ငန်းတံခါး High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness....
အလိုအလျောက်အတွင်းပိုင်း PVC အထည်အလိပ်မြန်လှိမ့်စက်မှုလုပ်ငန်းတံခါး High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness....
အလိုအလျောက်စက်မှုအတွင်းပိုင်း PVC မြန်နှုန်းမြင့်တံခါး High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness. Transparent...
အလိုအလျောက်အတွင်းပိုင်း PVC အထည်အလိပ်မြန်လှိမ့်တံခါး High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness. Transparent...
မြန်နှုန်းမြင့်လှိမ့်တံခါး High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness. Transparent curtain: 1.2 mm....
မြန်နှုန်းမြင့် Rolling PVC Shutter Door High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness. Transparent curtain: 1.2...
တရုတ်နိုင်ငံ PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး ပေးသွင်း
PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါးမိုးလုံလေလုံအသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲများနှင့်ကွဲကွာအဖြစ်သာကျန်ရှိနေသေးကြောင်းသင့်ကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောဒေသများအကြားလျင်မြန်စွာကိုင်တွယ်စစ်ဆင်ရေးသေချာနေကြသည်။ ဤရွေ့ကားလုံခြုံထိရောက်စက်မှုဇုန်တံခါးများတစ်ဦး shaped သံမဏိဘောင်၏ လုပ်. PVC နှင့်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားမြန်နှုန်းမြင့်တံခါးများလုံခြုံထိရောက်ဖြစ်ကြပြီး PVC နဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ပုံသံမဏိဘောင်ထားရှိရေး။ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသူတို့ရဲ့ photocells နှင့်အတားအဆီးများအားဖြင့်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးများ, အန်တရာယျမှကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးစွမ်းအင်ကယ်တင်နှင့်အကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်မှုများအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်များခွဲထုတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်။ တစ်ဦးကမြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကိုရဲ့အရေးအပါဆုံးအလုပ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လုံခြုံစိတ်ချစွာသင်ကလိုအပ်သည့်အခါတိုင်းရန်ရိုးရှင်းစွာဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်နီးစပ်သည်။
အဆိုပါမြန်နှုန်းမြင့် PVC လိပ်ရှပ်တာတံခါးကိုမြင့်လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်းနှင့်အဖွင့်၏ကြိမ်နှုန်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မြင့်မားသောမျိုးကွဲ, ဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်းအကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရှိသည်လိုအပ်သည်။ ထိုနညျးတူ, အရွယ်အစားနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းတည်နေရာများကဲ့သို့အခြေခံအခွအေနဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု technique ကိုနှင့် ပတ်သက်. စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာလိုအပ်ချက်များကိုအထိထည့်ပါ။
PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး အကြီးစား PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး ပွင့်လင်းမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး ဂရိတ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး OCM အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး